Bit By Bit - မေးမေးခွန်းတွေကို - 3.5.1 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဒင်္အကဲဖြတ်
သုတေသီတွေကကြီးမားတဲ့စစ်တမ်းများတက်ခုတ်ခြင်းနှင့်လူမျိုး '' ဘဝသို့သူတို့ကိုငါဖြန်းနိုင်ပါသည်။
ဂေဟစနစ်ဒင်္အကဲဖြတ် (EMA), အစဉ်အလာစစ်တမ်းများယူပြီးအပိုင်းပိုင်းသို့သူတို့ကိုငါတက်ခုတ်ခြင်း, သင်တန်းသားများ၏ဘဝသို့သူတို့ကိုငါဖြန်းဆွတ်ပါဝငျသညျ။ ထို့ကြောင့်စစ်တမ်းမေးခွန်းများကိုဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပွားခဲ့ကြရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်မဟုတ်ဘဲရှည်လျားသောအင်တာဗျူးတွင်ထက်, သင့်လျော်တဲ့အချိန်နှင့်နေရာမှာမေးလျှင်နိုင်ပါသည်။
EMA လေး features တွေကိုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်: စစ်မှန်သော-ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်မှာအချက်အလက်များ၏ (1) စုဆောင်း; (2) တစ်ဦးချင်းစီ '' လက်ရှိသို့မဟုတ်အလွန်မကြာသေးမီပြည်နယ်များသို့မဟုတ်အပြုအမူကိုအာရုံစိုက်ကြောင်းအကဲဖြတ်; (3) ကျပန်းအဖြစ်အပျက်-based, အချိန်-based, ဒါမှမဟုတ်မည်အကြောင်းအကဲဖြတ် (သုတေသနမေးခွန်းအပေါ် မူတည်. ) သတိပေးခံရ; နှင့် (4) အချိန်ကျော်မျိုးစုံအကဲဖြတ်ပြီးစီး (Stone and Shiffman 1994) ။ EMA ကတောင်းဖို့ချဉ်းကပ်မှုကိုအလွန်လူသောနေ့ရက်ကာလကိုတစ်လျှောက်လုံးမကြာခဏနှင့်အတူအပြန်အလှန်ကြောင့်စမတ်ဖုန်းများကိုအားဖြင့် facilitated ဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းများအာရုံခံ-ထိုကဲ့သို့သော GPS နှင့်အဖြစ်နှင့်အတူထုပ်ပိုးကြောင့်နောက်ထပ်, accelerometer-ကလှုပ်ရှားမှုပေါ်အခြေခံပြီးတိုင်းတာမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ ပို. ပို. ဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်တုံ့ပြန်တဲ့အထူးသဖြင့်ရပ်ကွက်အတွင်းသို့ဝင်လျှင်ဥပမာ, စမတ်ဖုန်းကိုစစ်တမ်းတစ်ခုမေးခွန်းဖြစ်ပေါ်ဖို့အစီအစဉ်နိုင်ပါတယ်။
EMA ၏ဂတိအကြိုက်ဖက်နောမိ Sugie ၏ dissertation သုတေသနလုပ်ငန်းများကသရုပ်ဖော်နေသည်။ 1970 ခုနှစ်မှစ. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသိသိသာသာကြောင့်ချုပ်ကြောင်းလူများ၏အရေအတွက်တိုးပွားလာခဲ့သည်။ 2005 ခုနှစ်၏အဖြစ်, တိုင်း 100,000 အမေရိကန်များအတွက် 500 ခန့်ကိုကမ္ဘာ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားသူထက်ထောင်ချခြင်း၏တစ်ဦးနှုန်းမှာပိုမိုမြင့်မား, ထောင်ထဲမှာရှိကြ၏ (Wakefield and Uggen 2010) ။ အကျဉ်းထောင်ဝင်လူဦးရေအရေအတွက်အမြင့်တက်လည်းထောင်ထဲမှာထွက်ခွာလူမျိုး၏အရေအတွက်တစ်ဦးတစ်ဟုန်ထိုးထုတ်လုပ်ပြီ အကြောင်း 700,000 လူအသီးအသီးတစ်နှစ်အကျဉ်းထောင်ထားခဲ့ (Wakefield and Uggen 2010) ။ ဤရွေ့ကားဟောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူထောင်ထဲမှာထွက်ခွာအပေါ်သို့ပြင်းထန်သောစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရနှင့်ကံမကောင်းအများအပြားပြန်ထောင်ထဲမှာတက်အဆုံးသတ်။ recidivism နားလည်လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်လူမှုရေး, သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်မူဝါဒချမှတ်သူများသူတို့လူ့အဖွဲ့အစည်း re-ဝင်ရောက်အဖြစ်ဟောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏အတှေ့အကွုံနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ဟောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုလေ့လာရန်ခက်ခဲဖြစ်လေ့နှင့်သူတို့၏ဘဝများအလွန်အမင်းမတည်မငြိမ်ကြောင့်သို့သော်လည်းဤဒေတာစံစစ်တမ်းနည်းလမ်းများနှင့်အတူစုဆောင်းရန်ခက်ခဲကြသည်။ တိုင်းလအနည်းငယ်စစ်တမ်းများလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ကြောင်းတိုင်းတာခြင်းချဉ်းကပ်သူတို့၏အသက်တာတွင်ဒိုင်းနမစ်၏ကြီးမားသောပမာဏလက်လွတ် (Sugie 2016) ။
အများကြီးကြီးမြတ်တိနှင့်အတူဟောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ Re-entry process ကိုစလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်, Sugie Newark, နယူးဂျာစီပြည်နယ်အကျဉ်းထောင်ထွက်ခွာတစ်ဦးချင်းစီ၏ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းထဲကနေ 131 လူဦးစံဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာကိုယူ။ သူမသည်တစ်ဦးကြွယ်ဝသောဒေတာစုဆောင်းပလက်ဖောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်တဲ့စမတ်ဖုန်းဖြင့်အသီးအသီးပါဝင်သူဖြစ်သည်။ Sugie စစ်တမ်းများနှစ်မျိုးစီမံခန့်ခွဲဖို့အဖုန်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာသူမဟာသူတို့ရဲ့လက်ရှိလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ခံစားချက်များကိုအကြောင်းကိုသင်တန်းသားများကိုတောင်းမနက်9နာရီနှင့်ညနေ6အကြားတစ်ဦးကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်အချိန်တွင်တစ်ဦး "အတှေ့အကွုံနမူနာစစ်တမ်း" ကိုစေလွှတ်။ , ဒုတိယအချက်မှာ 7pm မှာသူမထိုနေ့၌အပေါငျးတို့သလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. တောင်းတဲ့ "နေ့စဉ်စစ်တမ်း" ကိုစေလွှတ်။ , အတူတူအဲဒီနှစျခုစစ်တမ်းများကဤဟောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူရဲ့ဘဝတွေကိုအကြောင်းကိုအသေးစိတ်, longitudinal ဒေတာပေး။
ဤအစစ်တမ်းများမှထို့အပြင်ဖုန်းများပုံမှန်အစည်းအဝေးကြားကာလမှာသူတို့ရဲ့ပထဝီတည်နေရာမှတျတမျးတငျထားနှင့်ခေါ်ဆိုခနှင့်စာသား Meta-အချက်အလက်များ၏စာဝှက်ထားတဲ့မှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်။ ဒီအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း, အထူးသဖြင့် passive အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း, အားလုံးအချို့သောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမေးခွန်းထုတ်, ဒါပေမယ့် Sugie ရဲ့ဒီဇိုင်းကောင်းစွာသူတို့ကိုကိုင်တွယ်။ Sugie, ဒီဒေတာကိုစုဆောင်းဘို့အသီးအသီးပါဝင်သူမှအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိသင့်လျော်သောလုံခြုံရေးကာကွယ်မှုအသုံးပြုလျက်, ပထဝီခြေရာခံခြင်းပိတ်ရန်သင်တန်းသားများကို enabled ။ မည်သည့်ဒေတာစုဆောင်းခင်ထို့ပြင်အချက်အလက်များ၏အတင်းအကြပ်ထုတ်ဖော် (ဥပမာ, ကိုရဲကနေဆင့်ခေါ်စာ) ၏အန္တရာယ်ကို minimize နိုင်ရန်အတွက်, Sugie ဖက်ဒရယ်အစိုးရမှလျှို့ဝှက်တဲ့လက်မှတ်ရရှိသော (Beskow, Dame, and Costello 2008; Wolf et al. 2012) Sugie ရဲ့လုပျထုံးလုပျနညျး third-party (သူမ၏တက္ကသိုလ်ရဲ့ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့) ကသုံးသပ်, သူတို့သည်ဝေးလက်ရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြင့်လိုအပ်ပါသည်အဘယျသို့ကျော်လွန်ကွ၏။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကျွန်မသူမကိုအလုပ်ကဤတူညီသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်အခြားသုတေသီများများအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့မော်ဒယ်ကိုထောက်ပံ့ပေးစဉ်းစား; မြင် Sugie (2014) နှင့် Sugie (2016) တစ်ဦးထက်ပိုသေးစိတျဆှေးနှေးသည်။
တည်ငြိမ်တဲ့အလုပ်လုံခြုံနှင့်ကိုင်နိုင်စွမ်းအောင်မြင်တဲ့ reentry လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အရေးပါသည်။ သို့သော် Sugie သူမ၏သင်တန်းသားများကို '' အလုပ်အတွေ့အကြုံများကို, အလွတ်သဘောယာယီနှင့်ကြိုကြားကြိုကြားခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ "စောစောပိုင်းထွက်ပေါက်" (အလုပ်ရှာဖွေနေစတင်ထိုအခါမူကား, အလုပ်သမားစျေးကွက်၏ထွက်ယိုသောသူတို့အား), "နာတာရှည်ရှာဖွေရေး '(အလုပ်ရှာဖွေနေကာလများစွာဖြုန်းသောသူတို့အား): ထို့ပြင်သူမ၏ပါဝင်သူရေကူးကန်အတွင်း, လေးကွဲပြားပုံစံများရှိကြ၏ "ထပ်တလဲလဲအလုပ်" (ကာလအလုပ်လုပ်အများကြီးဖြုန်းသောသူတို့အား), နှင့် "အနိမ့်တုန့်ပြန်" (ပုံမှန်စစ်တမ်းများတုံ့ပြန်ကြပါဘူးသောသူတို့အား) ။ ထို့ပြင် Sugie အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေရပ်တန့်သောလူအကြောင်းပိုမိုနားလည်ချင်တယ်။ တစျခုမှာဖြစ်နိုင်ခြေသည်ဤရှာစိတျဓာတျနဲ့စိတျဓာတျဖြစ်လာနဲ့နောက်ဆုံးမှာအလုပ်သမားစျေးကွက်၏ကျောင်းထွက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေသတိထား, Sugie သင်တန်းသားများ၏စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်အကြောင်းကိုဒေတာစုဆောင်းဖို့သူမ၏စစ်တမ်းများအသုံးပြု, သူကို "အစောပိုင်းထွက်ပေါက်" အုပ်စုစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်မပျော်ရွှင်၏အဆင့်မြင့်သတင်းပို့မတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအစားဆန့်ကျင်ဘက်ကိစ္စပဲ: အလုပ်ရှာဖွေဆက်လက်သောသူတို့အစိတ်ပိုင်းရောက်သောပိုပြီးခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ဒီဒဏ်ငွေ-ဆန်စပါး, longitudinal အသေးစိတ်အားလုံးနှင့်ဟောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတားအဆီးတွေကိုနားလည်ပြန်လူ့အဖွဲ့အစည်းသို့သူတို့၏အကူးအပြောင်းဖြေလျော့ဘို့အရေးကြီးပါတယ်။ ထို့ပြင်ဒီဒဏ်ငွေ-စပါးကိုအသေးစိတ်အားလုံးတစ်ဦးစံစစ်တမ်းအတွက်လွဲချော်ခဲ့ကြပေသည်။
Sugie ရဲ့အလုပ်ကနေသုံးယေဘုယျသင်ခန်းစာတွေရှိတယ်။ ပထမဦးစွာတောင်းမှသစ်ကိုချဉ်းကပ်မှုနမူနာ၏အစဉ်အလာနည်းလမ်းများနှင့်အတူလုံး​​ဝသဟဇာတ ဖြစ်. , Sugie ရေတွင်းတစ်တွင်း-သတ်မှတ်ထားသောဘောင်လူဦးရေကနေစံဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာယူကြောင်း, မှတ်မိသေးတယ်။ ဒုတိယအမြင့်ကြိမ်နှုန်း, longitudinal တိုင်းတာမမှန်နှင့် dynamic ဖြစ်ကြောင်းလူမှုရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုလေ့လာနေဘို့အထူးသဖြင့်တန်ဖိုးရှိသောစေနိုင်ပါတယ်။ စစ်တမ်းဒေတာစုဆောင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်သောအခါတတိယအချက်, နောက်ထပ်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုပျေါပေါကျနိုငျသညျ။ ငါအခန်း6မှာပိုပြီးအသေးစိတ်သုတေသနကျင့်ဝတ်ပြုမူဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့် Sugie ရဲ့အလုပ်ကဤကိစ္စများအသိစိတ်နှင့်စဉ်းစားဟန်ဖြင့်သုတေသီများအားဖြင့်လိပ်စာဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။